NgoLwesihlanu, Novemba 19, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UBill Dawson
Izolo uGowalla ubhengezile intsebenziswano kunye nolunye lweempawu ezinkulu emhlabeni - iWalt Disney, Inc. Kukho abantu abaninzi abangakholelwayo kwimidiya yoluntu-singasathethi ke ngee-social apps ezinje ngeGowalla, (Foursquare neFacebook Places.) Ke, kutheni le ntsebenziswano inengqiqo?
Okokuqala, iyavakala, kuba uGowalla umalunga nokuzibandakanya komsebenzisi! Le nkonzo, efakwe usetyenziso kwi-iPhone yam, yenza ukuba kube lula ukungena kwiindawo ezikwisixeko sakho nakwihlabathi liphela. Ukutshintshiselana ngokwabelana ngeehaunts zakho ozithandayo, iingcebiso kunye neefoto, uvuzwa ngezitampu kwipasipoti yakho kunye nezinto ezishiyekileyo ngasemva kwiindawo. Kukudibanisa i-geo-caching enkulu, ukuzingelwa kwabaqwengayo, kunye neemephu zabakhenkethi- zibotshwe kwiphakheji enye enemifanekiso emihle.
Kwiipaki zeDisney, oku kuzibandakanya komsebenzisi kuguqulela kolunye uhlobo ukwandisa ukuzibandakanya ngexesha lohambo, ukonwabisa iindwendwe kunye nokuzikhuthaza ukuba ziphonononge. Kuhambo lwam lokuqala lokuya eWalt Disney World, ndathenga ipasipoti ye-EPCOT, eyandikhokelela kwivenkile yesikhumbuzo yawo onke amazwe ali-9 kuMboniso weHlabathi, apho ndingafumana khona isitampu kunye ne-autograph kwilungu lesamente. [Sifunde esi sivakalisi sokugqibela kwakhona, bathengisi.] Ndirhuqe abazali bam ndaya kubo kwiivenkile ezili-9 ezahlukeneyo, nditshintshisa ngezitampu! Yeyona ntetho indala yeepropathi zeDisney- “konke ukukhwela kuphelela kwivenkile yezipho.”
Doug Kwaye ndiyabakhuthaza abathengi bethu ukuba basebenzise ezona ndlela zisebenzayo ukubandakanya abasebenzisi kunye nokulinganisa ukuguqulwa. Kwilizwe elonyukayo elihamba kunye nedigital, kutheni ungasebenzisi isixhobo esinjengoGowalla? Njengenxalenye yokuphehlelelwa, iDisney ibonelele ngeendwendwe ngeendawo zokundwendwela ezibonisa uGowalla ezikhokelela iindwendwe ekukhweleni kwezitshixo (nakwiivenkile) kuzo zonke iipaki. Ukutshintshiselana, iDisney ifumana ubalo oluxabisekileyo kwinani leendawo ezihanjelwa ziindwendwe, ezikhwela zithandwa kakhulu, zeziphi iipaki ezifumana ezona zithuthi, njl.njl. ubutyebi bolwazi, olunokuthi emva koko lusetyenziselwe ukubandakanya abathengi kwakhona kunye nokwenza uguquko olusebenzayo.
Imithombo yeendaba yokuthengisa ihlala itshintsha, kodwa ukuzibandakanya komsebenzisi kufuneka kuhlala kuhlala kunjalo. Zeziphi izixhobo ezikhoyo ezinokuthi inkampani yakho iqale ukuvavanya ukuphucula ukuzibandakanya kunye notshintsho?